Cilmibaaris: Howlgalka Xasilinta Caasimadda oo Sababay Qasaaro Maaliyadeed oo Ka Badan $4.6 Milyan - Jazeera FM
Cilmibaaris: Howlgalka Xasilinta Caasimadda oo Sababay Qasaaro Maaliyadeed oo Ka Badan $4.6 Milyan
June 23, 2017 admin featured
Kulan golaha wasiirada DFS ay 11-kii bishii May ee lasoo dhaafay ku qaateen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku ansixiyeen barnaamij loogu magac daray Xasilinta Caasimadda oo ay xukuumadda ku dooneyso in ay ku sugto ammaanka Caasimadda.
Ciidan isku-dhaf ah oo isugu jira boolis, military iyo xoogga dalka Soomaaliya ayaa la hawlgaliyay si ay ammaanka u sugaan.
Tan iyo waqtigaas waxaa socdo howlgalada lagu sugayo amniga caasimadda, hase-ahaatee howlgaladdaas waxa ay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu-socodka dadweynaha.
Wixii ka dambeeyay qaraxii lala-beegsaday maqaayadda Pizaa House waxaa sii kordhay cadaadiska dadweynaha iyo ganacsatada ay kala kulmaan waddooyinka la gooyay ammaanka awgiis iyo waddooyinka kale ee ay buux-dhaafiyeen gawaarida la baarayo— oo keeneysa in ardayda ay dugsiyada ka daahaan, shaqaalayaashana ay shaqada ka habsaamaan.
Howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah u saameeyay dhallinyarta bajaajka ku xamaasha, gawaarida caasiga ah ee ay dadweynahu raacaan iyo dukaanleyda wax-ku-iibiya hareeraha waddooyinka.
Sidaa darteed Goobjoog Business waxa ay daraasad ka sameysay saameynta dhaqaale ee howlgalka Xasilinta Caasimadda uu ku yeeshay labadaas qeybood ee kala ah gadiidka iyo ganacsiga hareeraha waddooyinka.
Si aan ugu dadaalno saxnimada iyo sugnaashaha cilmibaarista waxaan la kulannay dad aad u fara-badan oo ay kamidyihiin dadka ay sida tooska ah u taabaneyso (isguna jira wadayaasha gaadiidka iyo dukaanleyda).
Hase-ahaatee waxaa innoo suuragashay in 160 kamid ah aan xog dhameystiran ka helno.
Dhammaantood waxaan weeydiinay dakhligii soo gali jiray howlgalka kahor iyo midka hadda (inta uu howlgalka socda) soo gala.
Dadkii aan la kulanay ee Caasileyda & Bajaajleyda ahaa dhammaantood waxaa ay ahaayeen rag, halka 32 kamid ah 80-ka qof ee dukaanleyda ah ay dumar ahaayeen.
Dukaamada aan booqanay waxa ay ku yaalaan degmooyinka Waaberi, Wadajir iyo Hodan.
Natiijada & Falanqeynta
Dhammaan dadkii aan la kulunay jawaabihii ay bixiyeen waan aruurinay, waxaanna ka sameynay celcelis middiiba, sidaa darteed ma aynaan qaadan tiradii ugu badneyd iyo tan ugu yar intaba. Suaalaha aan weydiineynay waxaan ku ogaaneynay isbadalka dakhliga bajaajleyda, caasileyda iyo dukaanleyda.
Celcelis ahaan halkii bajaaj waxaa maalintiiba soo gali jirtay howlgalada kahor dakhli gaaraya 25.19 doollar, halka inta howgallada ay socdaanna uu soo galo 16.04 doollar oo markii aan boqoleey aan ka dhignana noqoneysa inuu jiro hoos u dhac dhan 64% ama $9.15
Si aan u ogaanno tirada guud ee bajaajyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa aan xiriir la sameynay Waaxda Canshuuraha gobolka Benaadir, waxaana ay innoo sheegeen in ay u diiwaangeshantahay 13,750 bajaaj oo magaalada Muqdisho ka shaqeysa.
Sidaa darteed, halkii maalin dadka bajaajka ku shaqeysta oo dhan waxa ay qasaareen 13,750×9.15=$125,815.50
Halka Todobaadkiina ay qasaareen $125,815.50×7= $880,687.50
Halka Tobankii Maalin ee ugu dambeeyay ee uu howlgalka socdayna ay qasaareen $1,258,125.00
Caasi (Gadiidka Dadweynaha, BL-ka)
Celcelis ahaan halkii caasi waxaa maalintiiba soo gali jirtay howlgalada kahor dakhli gaaraya 60.35 doollar, halka inta howgallada ay socdaanna uu soo galo 27.25 doollar oo markii aan boqoleey aan ka dhignana noqoneysa hoos u dhac 45% ama $33.11
Waxaan isku daynay in raadino tirada guud ee Caasiyada ka shaqeysa magaalada Muqdisho ee dadweynaha qaada, hase-ahaatee waxaan ku qiyaasnay in ay la’egyihiin 2/3 bajaajyada. Sidaa darteed waxaan ku qiyaasnay 9,167, waxaanna aaminsannahay in ay intaa ka badantahay.
Sidaa darteed, halkii maalin dadka caasiga ku shaqeysta oo dhan waxa ay qasaareen 9,167×31.11=$303,508.33
Halka Tobankiina ay qasaareen $$303,508.33×7 = $2,124,558.33
Halka Tobankii Maalin ee ugu dambeeyay ee uu howlgalka socdayna ay qasaareen $3,035,083.33
Celcelis ahaan halkii dukaan ee ku yaalla waddooyinka waaweyn ee Muqdisho waxaa maalintiiba soo gali jirtay howlgalada kahor dakhli gaaraya 53.01 doollar, halka inta howgallada ay socdaanna uu soo galo 21.90 doollar oo markii aan boqoleey aan ka dhignana noqoneysa hoos u dhac 44% ama $31.11
Madaamaa ay adagtahay in la tiro-koobo dukaamada ku yaalla waddooyinka Muqdisho, waxaan la xiriirnay degmooyin kala duwan hase-ahaatee waa ay suurogali waysay in dagmooyinkaas aan ka helno.
Si aan mala-awaal oo dhan aan ugu fogaanno oo aysan wax dood ah ka dhalan waxaan qaadanay in 1,000 dukaan ay ku yaalaan hareeraha waddooyinka magaalada.
Sidaa darteed, halkii maalin guud ahaan 1,000-ka dukaan waxa ay qasaareen 1,000×31.11=$31,110.00
Halka Todobaadkiina ay qasaareen $31,110.00×7=$217,770.00
Halka Tobankii Maalin ee ugu dambeeyay ee uu howlgalka socdayna ay qasaareen $311,100.00
Gunnaanad & Talo Soojeedin
Guud ahaan markii aan isku darno qasaaraha howlgaladan kasoo gaaray (sadexda qeyb) 10’kii maalin ee ugu dambeeyay howlgalka Xasilinta Caasimadda waxa ay noqoneysaa $4,604,308.33, waana lacag aad u badan oo ay heli-lahaayeen ganacsatadaas.
Waxaa qasaarahaas sii dheer waqtiga, danaha iyo qorsheyaasha ka dhumay ganacsatadaas iyo dadweynaha intiisa kale.
Goobjoog Business hadafkeedu ma aha in ay faallo ka bixiso in howlgalka Xasilinta Amniga lagu guuleystay iyo inkale, balse waxa ay ka walaacsantahay qasaarahaas intaa la eg ee sii socon doono haddii qaabka howlgalka loo wado uu u sii socdo.
Ugu dambeyntii Goobjoog Business waxa ay hay’adaha ay quseyso usoo jeedineysaa in ay il-gaar ah ku eegaan ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee ay waxyeelada ka soo gaareyso howlaha iyo howlgallada ay fulinayaan.
Xogta Cilmibaarista Waxaa Soo Ururiyay:
Cabdiwali Jaamac Barre
Xasan Kaafi Xaaji Maxamad
← Dalalka Carbeed oo sharuudo adag ku xiray Qatar si xayiraada looga qaado
Milkiilaha Facebook oo la Kulmay Soomaalida Minneapolis →